कोरोना भाइरस सम्बन्धमा बागमती प्रदेशको अवस्था विश्लेषण – इन्सेक
बागमती प्रदेश ०७६ चैत १९ गते
विश्वव्यापी माहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाको स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै सतर्कता, पूर्वतयारी तथा सचेतनाको लागि कार्य गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा ३ सय ३७ आइसोलेशन बेड तयार गरिएका छन् । सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि आइसोलेशन बेड तयार पारेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १७ गते बसेको बैठकले यसअघि १० करोड रुपियाँ रहेको कोषमा ४० करोड रुपियाँ थपेर ५० करोड रुपियाँ पु-याउने निर्णय गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको प्रयासबारे यस प्रदेशका १३ ओटै जिल्लाको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ ।
रामेछापबाट इन्सेक प्रतिनिधि नबराज पथिकका अनुसार रामेछाप जिल्लामा ७७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । रामेछापमा ५३ जनाको क्षमतायुक्त आइसोलेशन वार्ड र २ सय २९ जनाको क्षमतायुक्त क्वारेन्टाइन कक्षा स्थापना गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र अन्य विभिन्न देशबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका प्रमुख जितेन्द्र कुमार कर्णका अनुसार चैत १८ गतेसम्म गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा १० जना, दोरम्बा गाउँपालिकामा ४ जना, मन्थली नगरपालिकामा ९ जना, रामेछाप नगरपालिकामा २६ जना , सुनापति गाउँपालिकामा १२ जना, खाँडादेवी गाउँपालिकामा ११ जना, लिखुतामाकोशी गाउँपालिकामा ५ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
यसमध्ये ६७ जना होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । दोरम्बा गाउँपालिकामा होम क्वारेन्टानमा बसेका ६ जनाको स्वास्थ्य सामान्य भएपछि उनीहरूलाई निगरानीबाट छुटाइएको कर्णले जानकारी दिनुभयो । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि रामेछाप जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् । जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा आवश्यक पर्दा चिकित्सकहरू गएर उपचार गर्न सक्ने गरी ५३ बेड आइसोलेशन कक्ष र २ सय २९ बेड क्वारेन्टाइन स्थापना भई सकेका छन् ।
हालसम्म मन्थली नगरपालिकामा २२, रामेछाप नगरपालिकामा ७, दोरम्बा गाउँपालिकामा ७, सुनापति गाउँपालिकामा ६ र खाँडादेवी गाउँपालिकामा ११ बेड आइसोलेशन सेन्टर स्थापना गरिएको कर्णले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्थली नगरपालिकामा २०, रामेछाप नगरपालिकामा ६०, दोरम्बा गाउँपालिकामा आठ, खाँडादेवी गाउँपालिकामा ४३, गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा १६,उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ४५ र लिखुतामाकोशी गाउँपालिकामा ३७ बेड क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको कर्णले जानकारी दिए । भारतलगायत विदेशबाट फकिर्एका सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आउन समेत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापले आग्रह गरेको छ ।
यसै गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबावु धितालका अनुसार जिल्लामा ५८ ओटा आइसोलेशन बेड तयार भएका छन् । जिल्लामा रहेका १३ स्थानिय तहको सहकार्यमा विभिन्न स्थानमा आइसोलेशन बेड तयारी भएको हो । स्थानिय सरकारको अगुवाइमा सुविधा सहितको आइसोलेशन बेड तयारी गरेपछि भाइरस सङ्क्रमितलाई उपचारमा सहज हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताउनु भयो ।
जिल्लामा रहेका सबै स्थानिय तहको सहकार्य र समान्वयमा इन्द्रवती गाउँपालिकामा ६ ओटा, बलेफी गाउँपालिकामा दुइ ओटा, भोटेकोशी गाउँपालिकामा १० ओटा, बाह्रबिसे नगरपालिकामा १० ओटा, चौतारा नगरपालिकामा १५ ओटा र मेलम्ची नगरपालिकामा १५ ओटा बेडको आइसोलेशन केन्द्र स्थापना भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईले बताउनु भयो । उहाँको भनाई अनुसार भोटेकोशी र बाह्रबिसेको आइसोलेशन केन्द्रमा पाँचजना उपचारको लागी राखिएको छ ।
यसै गरी भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेश गिरीका अनुसार यहाँका स्थानीय तहहरू स्थानीयबासीको लागि राहत वितरण गर्न सक्रिय भएका छन् । भक्तपुरमा चारओटै स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व रहेको संयुक्त सुरक्षा फौज सक्रिय रहेका छन् । क्वारेन्टाइन निर्माण, आइसोलेशन वार्ड निर्माण, विदेशबाट फर्किएकाहरू,दैनिक ज्यादामजदुरी गर्नेहरूको लगत सङ्कलन, अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण कदमहरू चालेका छन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणकालागि दुई करोड ५० लाख रुपियाँको आपतकालिन कोष खडा गरेको छ । कोषमा नगरपालिकाले ३० लाख रुपियाँ जम्मा गरेको छ भने नगरपालिकाले नगरभित्रका जनप्रतिनिधीहरूको दुईमहिनाको सेवा सुविधा वापतको रकम, नगरभित्रका सबै शिक्षक र कर्मचारीको १५ दिनको तलब, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकम र नगरभित्र सञ्चालित उद्योग, कलकारखाना, विद्यालय, सहकारी, व्यवसायि एवम् सङ्घ संस्थाले प्रदान गर्ने रकमलाई कोषमा जम्मा गरि २ करोड ५० लाख पु-याउने भएको छ ।
त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकाले प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीको नेतृत्वमा आपूर्ति सहज गर्न समिति गठन गरेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाका १० ओटै वडामा वडाध्यक्ष मार्फत मजदुर न्यून आय भएकालाई एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने एवं खाद्यान्न आपूर्ति सहज गर्ने भएको छ ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र न्यून आय भएकालाई निजीस्तरबाट राहत वितरण गर्न थालिएको छ । यसैक्रममा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको पहलमा असहाय, शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा ज्याला मजदुरी गरी गुजारा चलाउने व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क खाद्य सामाग्री वितरण गरिएको छ । विभिन्न बैंकहरूसँगको सहकार्यमा असहाय, शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा ज्याला मजदुरी गरी गुजारा चलाउने व्यक्तिहरूका लागि निशुल्क खाद्य सामाग्री वितरण गरिएको हो ।
भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि गिरीकै अनुसार काठमाडौँ महानगरले राहत वितरण काम सुरु गरेको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएर दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न समस्या भएकाहरूका लागि चैत १९ गतेदेखि राहत सामग्री वितरण सुरु गरेको हो । महानगरपालिकाले विपन्न, असहाय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई परिवार सङ्ख्याका आधारमा राहत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो । सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने वर्गका परिवारलाई खाना र खाजाका मापदण्ड बनाइएर समान रुपमा वितरण सुरु गरेको महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिकाले अभिभावक नभएका, आफ्नो आयश्रोत तथा जायजेथा नभएका, अरुको सहयोग तथा सहारामा बस्दै आएका व्यक्ति, अनाथ आश्रम, बृद्धाश्रम, संरक्षण गृह, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद आदिमा आश्रित व्यक्ति, कुनै स्थायी आयश्रोत नभएका, दैनिक जीवन गुजारा गर्न समस्या पर्ने, भरियालगायतलाई सम्बन्धित वडाले अति विपन्न हो भनेर प्रमाणित गरेका व्यक्ति र परिवारलाई राहतवितरण सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरले परिवार एकजनालाई चार किलो चामल, एक किलो दाल, एक किलो नुन, आधा लिटर तेल, आधा किलो चिउरा र एक किलो तरकारीको प्याकेट, दुईदेखि चारजनाको परिवारलाई १२ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक किलो नुन, आधा लिटर तेल, दुई किलो चिउरा र तीन किलो तरकारीको प्याकेट र पाँच जनाभन्दा धेरै संख्या रहेको परिवारलाई १६ किलो चामल, तीन किलो दाल, एक किलो नुन, एक लिटर तेल, तीन किलो चिउरा र चार किलो तरकारीको प्याकेट बनाएर वितरण सुरु गरेको हो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्न कालिका गाउँपालिकाले ५० जना क्षमताको क्वारेन्टाइन तथा जिवजिवे ग्रामीण अस्पतालमा १५ सैयाको आइसोलेशन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । लकडाउनपछि पर्यटकीय क्षेत्र रसुवाको लाङटाङमा २८ जना विदेशी पर्यटकको उद्दार गरिएको रसुवा जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाले बताउनु भयो । नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीक नाका रसुवागढीमा कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को परीक्षणका लागि भवन निर्माण भयो । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट जिल्ला फर्कनेको सङ्ख्या स्थानीय तहका वडा वडाबाट अद्यावधिक गर्न पत्राचार गरेर काम सुरु गरिएको छ । जस अनुसार जिल्लाभर १६ जनाको जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताउँनुभयो ।
यस्तै सिन्धुली जिल्ला प्रतिनिधि बिमला पाण्डेका अनुसार विदेशबाट फर्कका १ सय ७६ जना सबैलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । भारतबाट फर्केका ८५ जना र तेस्रोे मुलकबाट फर्केका ९१ जना सबै होम क्वारेन्टाईनमा रहेकोे हो । होम क्वारेन्टाईनमा रहेका विदेशबाट आउने नागरिककको स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको निगरानीमा रहेका छन् ।
सिन्धुली अस्पतालको आइसोलेशनमा भर्ना भएका पाँचौ व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन चैत १९ गते सार्वजनिक भएको छ । रिपोर्टमा कोरोना सङ्क्रमण नदेखिको बताइएको छ । सिन्धुलीमा १९ गते थप कोही आइसोलशनमा नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सिन्धुलीको स्थानीय निकायहरुले लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्न सङ्कट नहोस् भनेर राहत वितरण सुरु गरेका छन् । कमलामाई नगरपालिकाले मजदुरलाई राहत वितरण गरिरहेको छ । सुनकोशी गाउँपालिकाले गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै एम्बुलेन्स चालकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै उनीहरूलाई एक/एक सेट पिपिई र सेनिटाईजर, माक्स उपलब्ध गराउने निर्णय चैत १८ गते गरेको छ ।
चितवन जिल्लामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा १९ जनाको उपचार भइरहेको चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले जनाउनु भएको छ । चितवनमा रहेको ७० वेडको कोरोना विशेष अस्पताल २० वेड आइसीयु र ५० वेड सामान्य वार्ड रहेको छ । कोरोना सङ्क्रमित आशङ्का गरिए पनि हालसम्म कसैको पनि रिर्पोट पोजेटिभ नभेटिएको अस्पतालका व्यवस्थापक डाक्टर भोजराज अधिकारीले बताउनु भयो ।
त्यस्तै भरतपुर अस्प्तालमा ३० वेडको आइसोलेशन वार्ड रहेकोमा चार जना सङ्काष्पद बिरामीहरूको उपचार भइरहेको अस्पतालका सुचना अधिकारी लिलाधर पौडेलले बताउनु भयो । भरतपुर महानगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा डि इन्फेक्सन छरेका छन् । साथै इच्छाकामना गाउँपालिकाले आफ्ना पालिकाका स्थानीय अन्य ठाउँमा अलपत्र परेकाहरूको उद्दार थालेको गाउँपालिका प्रमुख गीता गुरुङले बताउनु भयो ।
इन्सेक दोलखा जिल्ला प्रतिनिधि उद्धव पोखरेलका अनुसार दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले बिदेशबाट घर फर्केकाहरूको घरमा रातो झण्डा राख्ने कार्य थालेको छ । विदेशबाट फर्केकाहरूको पहिचान तथा तथ्याङ्क अभिलेख गर्दा पालिकाले यो कार्य थालनी गरेको हो ।
यस्तै नुवाकोट जिल्ला प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठका अनुसार चैत १९ गतेसम्म जिल्लामा ३ सय ८६ जना सेल्फ क्वारेनटाइनमा रहेका छन् भने १४ जना स्थानीय तहको क्वारेनटाइनमा राखिएका छन् । १२ ओटा स्थानीय तहले २ सय ६ ओटा बेड क्षमताको क्वारेनटाइन निर्माण गरेका छन् । जिल्लामा हालसम्म २ सय ६९ जनाको ज्वरो परीक्षण गरिएको ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्व तयारी गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालको कोषमा ११ पालिकाहरूले २ लाख रुपियाँको र विदुर नगरपालिकाले तथा जिल्ला समन्वय समितिले १२ लाख रुपियाँले सुविधासम्पन्न आइसोलेशन वार्ड निर्माण गरेका छन् । चार ओटा पालिका र जिससबाट रकम आइसकेको र अन्यबाट आउनेक्रममा रहेको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. रेमकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा विभिन्न निर्माण आयोजनामा कार्यरत करिब ३ सय जनालाई यातायात पास बनाएर मजदुरहरुलाई उनीहरुकै जिल्लामा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताउनु भयो । जिल्लामा कुनै सङ्क्रमणको आशङ्का भएकाहरूलाई परीक्षणको लागि तयारी अवस्थामा स्वास्थ्य टिम रहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा सामग्री जिल्लामा १ सय २ थान रहेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि पूर्व तयारी गरिरहेका छन् ।
यस्तै मकवानपुर जिल्लामा चैत १६ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ३ सय १ जना विदेशबाट फर्केका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा विदेशबाट आएकाहरूको सङ्ख्या १ सय २८ रहेको छ भने थाहा नगरपालिकामा ६७ रहेको छ । मकवानपुर प्रतिनिधि पुष्पराज अधिकारीका अनुसार विदेशबाट फर्केकाहरूमा इन्द्रसरोवर गाउँपालकामा १६, भीमफेदी गाउँपालिकामा १२, मनहरी गाउँपालिकामा ४८, राक्सिराङ गाउँपालिकामा एक, बाग्मती गाउँपालिकामा ११, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिकामा पाँच/पाँच जना रहेका छन् ।
विदेशबाट आएका सबै ३ सय १ जनाको नै प्रारिम्भक स्क्रिनिङ गरिएको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको छ । प्रशासनका अनुसार चैत १६ गतेसम्म हेटौँडा नगरमा रहेका दुइजना आइसोलेशनमा छन् भने बाँकी होम क्वारेन्टाइनमा छन् । बागमती गाउँपालिकाका एकजना काठमाडौंमा क्वारेन्टाइनमा बसेर आएका छन् ।
जिल्लामा ३ सय ३७ वेडको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइएको छ । जसमा नेपाली सेनाले ५० वेड, सशस्त्र प्रहरी बल हेटौंडाको एकसय वेड र हेटौंडा ६ गौरीटारस्थित खेलकुद प्रतिष्ठानको भवनमा ३७ वेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहबाट हेटौंडा उपमहानगरको ११ नम्बर वडा स्थित हेटौंडा एकेडेमीमा एकसय वेड, थाहा नगरपालिकाको ओम अध्याय रिसोर्टमा २५ र मनहरी गाउँपालिकाको अग्निहोत्राश्रममा २५ वेडको क्वारेन्टाइन तयार छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कमाण्ड टिमले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी पास अबका दिनमा उपलब्ध नगराउने निर्णय चैत १९ गते गरेको छ । यस्तै दुग्धजन्य वस्तु खरीद तथा बिक्रिका लागि बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म र तरकारी लगायत खाद्यान्न खरीद विक्रिका लागि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्मको लागि समय तोकेको छ ।
यस्तै काभ्रे जिल्ला प्रतिनिधि हिरामान तामाङका अनुसार मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा १७ जनालाई क्वारेन्टाइन राखिएको छ । विदेशबाट आएका आठ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । एक जना उपचारपाछि चैत १९ गते घर फर्केका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि नगरपालिकाले टेलिभिजन, बाइफाई र खाना बस्नको राम्रो व्ययस्था गरेको छ ।
काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले फूड बैंक सञ्चालन गर्ने निर्णय चैत १९ गते गरेको छ । नगर स्तरीय विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरस महामारीको विपद्का कारण दैनिक हातमुख जोर्न समस्या रहेका मध्ये वडाले पहिचान गरेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन फूड बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख भिमप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
बैंकमा सङ्घसंस्था,व्यक्ति वा अन्य निकायले नगरपालिकाको मापदण्डभित्रका दैनिक उपभोग्य वस्तु सङ्कलन गर्न पाउने छन् । फूड बैंकमा खाद्यान्नसँगै साबुन, सेनीटाईजर, मास्क जस्ता स्वास्थ्यका लागि चाहिने सामान समेत सङ्कलन गर्न पाइने छ । फूड बैंक व्यवस्थापनका लागि बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई संयोजक तोकिएको छ । इन्द्रेश्वर प्राथमिक विद्यालयको भवनमा फुड बैंक रहनेछ ।
यसै गरी धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीका अनुसार जिल्लामा बिदेशबाट आउनेको संख्या ४ सय रहेकोछ । जिल्लामा ३१ ओटा करेन्टाइनमा ४ सय ७९ जना र आइसुलेसनको क्षमता २४ जनाको रहेको छ । पाँच जना महिला सहित ५८ जनालाई क्यारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
यसैबीच गंगा जमुना गाउापालिकाले विदेशबाट आएकाहरुको तथ्याङ्क सहित फोन नम्बर राखेको छ । उनिहरू सबै जना घरमै क्वारेनटाइनमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बलबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । पालिकाका सात ओटै वडामा १०/१० जना राख्न सकिने गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा हेल्थ डेक्स राखिएको छ । यस पालिकामा विदेशबाट आएका ३० जनाको अवस्थाको बारेमा नियमित जानाकारी वडा र स्वास्थ्य कार्यालयले राखेको स्वास्थ्य संयोजक दीपक अधिकारीले बताउनु भयो ।
यसै गरी इन्सेकका ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि दीपकप्रसाद घिमिरेका अनुसार ६ ओटा स्थानीय तह रहेको ललितपुर जिल्लामा लगनखेलको पाटन अस्पताललाई कोभिड–१९ को हब हस्पिटलका रुपमा लिइएको छ । अस्पतालले २०७६ चैत १९ गतेसम्म कोभिड–१९ को आशंका रहेका ३० जना बिरामीको उपचार गरी घर पठाइ सको छ भने तीन जना बिरामीलाई अस्पतालको आईसोलेसन वार्डमा राखिएको अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले जानकारी दिनुभयो । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ भने डिस्चार्ज गरिएका ३० जना बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको र रिपोर्ट नेगेटिभ पाईएको पनि डा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा लकडाउनको पालना कडाइ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एवम् एसएसपी टेकप्रसाद राईले बताउनु भयो । यस अवधिमा सडकमा भेटिएका ४ हजार ९ सय ९६ जनालाई सम्झाएर गन्तव्य तर्फ पठाइएको एसएसपी राईले बताउनु भयो । लकडाउन भनेको के हो भन्ने बुझाउन नसक्दा समस्या परेको छ । विदेशबाट आएका मानिसका ९५ प्रतिशत जनताले अनुशासन पालना गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
कोभिड १९ को सङ्क्रमणको जोखिम न्युनिकरणको लागि यस प्रदेश अन्तर्गत १३ ओटै जिल्लाका स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल प्रहरीबाट समेत काम भइरहे पनि जिल्लामा भइरहेका कामहरूको एकिकृत सूचना प्रणालि अपनाउन सकेको पाइँदैन । राहात वितरण, दैनिक रोजगारी गरी खानु पर्ने श्रमिकको लागत, क्वारेन्टाइन र आइसुलेसनको तथ्याङ्क, बिदेशबाट आएकाको विवरण लगायतको अभिलेख एकमुष्ट हुन नसक्दा सरकारी काम र संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको जिल्ला प्रतिनिधिहरूले बताउनु भएको छ ।